Qaab-qorista qoraalku waa ii xiiso. Kartida naqshadeeyayaasha si ay u horumariyaan xarfaha oo labaduba gaar ah oo xitaa awood u leh inay muujiyaan shucuur maahan wax ka yaab badan. Laakiin maxaa ka kooban warqad? Diane Kelly Nuguid waxay isku dubariday xogtii ugu horreysay si ay u bixiso aragti ku aaddan qaybaha kala duwan ee warqadda qaab qorista. Guji si aad u aragto aragti dhammaystiran. Muuqaalka Erey bixinta Qaab-dhismeedka Ereybixinta - Furitaanka ama qayb taban oo qayb ahaan ku lifaaqan oo ay abuurtay